बेला-बेलामा मरेका मानिस सपनामा देखिन्छन् ? हुनसक्छ यस्तो संकेत | Rochak
September 8, 2021 NepstokLeaveaComment on बेला-बेलामा मरेका मानिस सपनामा देखिन्छन् ? हुनसक्छ यस्तो संकेत
जीवन र मरण जीवनको सबभन्दा ठूलो सत्य हो। जन्मिने मान्छे मर्नैपर्छ। आफूनजिक रहेका मृत व्यक्ति कहिलेकाहीँ सपनामा आउँछन्। यस्तो अनुभव अनौठो रहस्यमय हुन्छ। मनोविज्ञानका अनुसार सपनाहरूमा विशेष सन्देश लुकेका हुन्छन्। सपनामा देखापरेर मृत व्यक्तिहरूले निर्देशन वा आश्वासन दिन्छन्। पछि हुने कुनै नराम्रो घटनाका बारेमा सावधान पनि गराउँछन्।
सपनामा लुकेका सन्देश बुझ्दा मान्छेले जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। यस्ता सपनाहरूमा उठ्ने भावना तीव्र र ज्वलन्त हुन्छन्। सपना देख्नेले आफू वास्तविकता बाँचिरहेको छु भन्ने ठान्छ। कहिलेकाहीँ त निद्रा खुलेपछि पनि मानिस सपनाको प्रभावबाट बाहिर निस्कँदैन। यस्ता सपनाको प्रभाव केही क्षणदेखि धेरै वर्षसम्म रहन सक्छ। यस्ता सपनामा देखिने परिचित व्यक्ति जीवनमा बिरामी थिए वा बिरामीकै कारण मरेका हुन् भने पनि स्वस्थ देखिन्छन्। सपनामा देखिने उनीहरूको अनुहार तेजिलो देखिन्छ।
मृत परिचितले सपना देख्ने मान्छेलाई आफू जहाँ भएपनि खुशी भएको आश्वासन दिन्छन्। तिमी पनि खुशी भएर बस भनी उनीहरू बताउँछन्। सपनामा आउने मृत प्रियजनले जीवनमा आउने ठूलो समस्याका बारेमा सावधान गराउँछन्। जीवनका महत्वपूर्ण फैसलामा उनीहरू निर्देशन दिन पनि आउँछन्। सपनामा आउनेले कहिलेपनि आफ्नो कुरा शब्दमा व्यक्त गर्दैनन् । इशारा र हाउभाउबाट आफ्नो कुरा बताउँछन् । इशारालाई बुझ्न सपना देख्नेलाई गाह्रो हुँदैन।
यस्तो सपना देख्ने व्यक्तिले आफूमा सकारात्मक ऊर्जा आएको महसूस गर्छ । दुःखबाट मुक्ति पाउन मद्दत गर्छ यस्तो सपनाले। जीवनमै परिवर्तन आउन सक्छ यस्तो सपना देखेपछि। भौतिक शरीर छोडेर जाने हाम्रा प्रियजन हाम्रो सपनामा झुल्किने भनी अध्यात्म र मनोविज्ञान दुवैमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरू हाम्रो हितका लागि देखापर्छन् । हामीले त उनीहरूको इशारा बुझे पुग्छ।
October 11, 2021 Nepstok